Inta badan kooxaha waaweyn ayaa wada badiyay. Naadiga Barcelona waxya si fudud ku dhaafray kooxda Olympiakos oo ay ku garaacday 3-1. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay xidiga Barce Lionel Messi, wuxuu ahaa goolkiisii boqlaad ee uu ka dhaliyo tartankan. Wuxuu noqonayaa laacibka labaad ee ugu goolasha badan tartanka horyaalada Yurub, waxaa ka sarreeya Cristiano Ronaldo oo leh 112 gool.
Goolasha kale mid waxay Barcelona ku heshay gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Dimitris Nikolaou halka kan saddexaadna uu keenay Lucas Digne.
Kooxaha kale ee sida wanaagsan u badiyay waxaa ka midah Paris St-Germain oo 4-0 ku dardartay kooxda Anderleckt. Goolasha waxaa kala qeybsaday Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar iyo Angel di Maria.
Dhinaca kalana Bayern Munich ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Celtic, kadib marki ay ugu awood sheegatay 3-0. Goolka hore waxaa Bayern u daah furay Thomas Mueller, halka goolasha kale ay dhaliyeen Joshua Kimmich iyo Mats Hummels.
Juventus waxay 2-1 dirqi ah uga adkaatay kooxda Sporting. Goolka waxaa la hormartay kooxda reer Portugal, waxaana goolkaasi uu ahaa mid uu shabaqa kooxdiisa uu ku laabay daafaca Juve, Alex Sandro. Balse Juventus ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u keenay Miralem Pjanic halka golka guushana uu madaxa ugu dhaliyay Mario Mandzukic.
Kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain ayaa haldhibic kalasoo laabatay magaalada Baku ee dalka Azerbaijan kadib marki ay barbaro goolal la,aan ah ku dhamaatay kulanki ay la dheeshay kooxda Qarabag. Waxay aheyd dhibcidi ugu horeysay ee ay Qarabag ka hesho koobka kooxaha horyaalada Yurub abid.
Manchester United waxay 1-0 uga badisay Benfica, halka Chelsea iyo Roma ay ku kala baxeen bareejo 3-3.